महासचिव शाहीको उत्प्रेरक प्रोपाईल – Karnalisandesh
महासचिव शाहीको उत्प्रेरक प्रोपाईल
प्रकाशित मितिः १३ मंसिर २०७६, शुक्रबार १०:१२ November 29, 2019
सुर्खेत । नेपाल तरुण दलका महासचिव भुपेन्द्रजंग शाही नेपाली कांग्रेसका सम्भावना बोकेका युवा राजनीति कर्मी हुन्। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सानै उमेरमा प्रतिनिधि सभाको लागि उनी दुई पटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिइसकेका छन्। उनी दुई दुइ पटक टिकट पाउने भाग्यमानी युवा नेता हुन्। बिडम्बना दुबै पटक उनी पराजित भए।
नेपालको दुर्गम जिल्ला कालिकोटबाट आएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो बलियो स्थान बनाउन सफल नेता शाहीले कसरी राजनीति सुरु गरे ? कहाँबाट राजनीतिक प्रारम्भ गरे ? र अहिलेसम्म के के काम गरे ? उनै शाहीको राजनीतिक जीवन यात्रा (प्रोफाइल म्याटर) यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।
नेपाल विद्यार्थी संघको स्कुल इकाई समितिबाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्दा भुपेन्द्रजंग शाही श्री पन्चदेब उमाबी मान्म कालिकोट कक्षा ६ मा अध्ययनरत थिए। मावि तहमा अध्ययन गर्दा–गर्दै उनी स्कुल इकाई सदस्य, उपाध्यक्ष र अध्यक्षहुँदै जिल्ला सदस्य भए। २०५४ सालमा नेविसंघको जिल्ला सचिव बनेका शाही उपाध्यक्ष हुँदै जिल्ला अध्यक्ष भए।
नेपाल कमर्स क्याम्पसमा अध्ययन शुरु गरेपछि शाहीलाई थप जिम्मेवारी आयो। क्याम्पसमा उनी स्ववियु सदस्यमा निर्वाचित भए। नेबिसघ कालिकोट–काठमाडौं सम्पर्क समितिका अध्यक्ष भएर सामाजिक जीवनमा प्रवेश गरेका शाही कर्णाली कै साझा मंचको रुपमा रहेको कर्णाली विद्यार्थी हित समितिको सभापति बने।
तीन कार्यकाल नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरेपछि उनी २०६४ सालमा नेबिसघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भए। विद्यार्थी राजनीति बाट चर्चामा आएका शाही नेबिसघको केन्द्रीय अध्यक्षका लागि तयारीमा थिए। तर, उनको समयमा महाधिवेशन हुन सकेन। नेता शाही विद्यार्थी नेता हुँदाको समयमै पार्टीबाट २०७० सालको संविधान सभामा कालिकोटबाट उम्मेदवार बने। शाहीका अनुसार नेविसंघका तत्कालिन केन्द्रीय अध्यक्ष तथा वर्तमान कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललेसमेत टिकट पाएका थिएनन्।
निर्वाचनमा पराजित भएपछी युवा नेता शाहीले हार खाएनन्। उनले निर्वाचनमा जनताको बीचमा बोलेको बाचा पूरा गर्न हारे पनि जित्ने भन्दा दुई वटा काम बढी गरेर देखाउन जिल्लाको बिकासमा सक्रिय भए। शाहीकै नेतृत्वमा कालिकोटको बिकास, समृद्धि र समुन्नतिको लागि (सुन्दर कालिकोट, समृद्ध कालिकोट) अभियान पनि सुरू भयो।
युबाहरूको बीचमा लोकप्रिय बनेका युबा नेता शाही २०७३ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको मेरुदण्ड मानिने युवाहरुको संगठन नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय महासचिव भएर युवा राजनीतिमा सक्रिय छन्। नेपाली कांग्रेस कालिकोट-काठमाडौं सम्पर्क समितिको सभापतिसमेत रहिसकेका शाही दुई कार्यकालदेखि नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्यको समेत जिम्मेवारीमा रहेका छन्।
युवा नेता २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कालिकोटका सभासद्को प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका शाही संगठनप्रतिको निष्ठा र सक्रियताकै कारण चुनाव लड्ने जिम्मेवारी पाएको उनको दावी छ। शाही नेपाली कांग्रेसमा सानै उमेरमा सभासद्को प्रत्यक्षतर्फको टिकट प्राप्त गर्ने भाग्यमानी युवा नेता मानिन्छन्। तर, पार्टीभित्रकै अन्तरकलहका कारण उनी विजयी भने हुन सकेनन्।
यसैगरी २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले शाहीलाई नै प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको थियो। तर, दुर्भाग्य २०७४ मा पनि बाम गठबन्धन उनको लागि बाधक बन्यो। उनले ०७० मा साढे आठ हजार मत प्राप्त गरेका थिए। २०७४ मा दोब्बर मत प्राप्त गरे। साढे सोह्र हजार मत प्राप्त गर्नुले पनि कालिकोटका युवा वर्गका प्रिय नेता हुन् भन्न सकिन्छ।
युवा नेता शाही राजनीतिमा मात्र नभएर लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। उनले तराजुमा माया र लासहरूको वस्ती गजल संग्रह प्रकाशित गरेका छन्। ‘बन्दीगृह’ उपन्यास, नेविसंघ विगत र वर्तमान तथा नेपाली कांग्रेस प्रशिक्षण पुस्तिका प्रकाशित छन्। ‘सुन्दर कालिकोट, समृद्ध कालिकोट’को लेखन तथा सम्पादन गरेका शाहीले ‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस’ वृत्तचित्रको लेखन तथा निर्देशन गरेका छन्।
बेलाबेलामा राष्ट्रिय दैनिकहरुमा उनका लेखहरु पनि प्रकाशित भैरहेका छन। थुप्रै गीतहरुको पनि रचना गरेका शाहीले कांग्रेसको इतिहास समेटिएको गीत तथा नेबिसघ नेबिसघ हाम्रो नेबिसघ भन्ने चर्चित गीत पनि शाहीले नै निर्माण गरेका हुन्।
यसका साथसाथै सामाजिक सेवामा पनि काम गरेका छन्। शाहीले निःशुल्क छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सिबिरलगायतका सामाजिक कार्यहरु पनि थुप्रै गरेका छन्। नेता शाहीले कालिकोटका विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृति प्रदान गर्नका लागि एक लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन्।
शाहीले कालिकोटका एक जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको प्रबन्ध गरेका छन्। त्यसैगरी, पत्रकार महासंघसँगको सहकार्यमा वर्षेनी एक जना पत्रकारलाई लेखन वृत्तिबापत पुरस्कृत गर्ने उनको योजना अनुसार एक लाखको अक्षयकोष स्थापना गर्न शाहीले ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेका छन्।
डा.ललितजङ्ग शाहीसँगको सहकार्यमा इटालीबाट चिकित्सकको टोली बोलाएर कालिकोटमा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेका थिए। शाही जिल्लामा निरन्तर सामाजिक कार्य र विकासका काममा सधै सक्रिय हुने नेता हुन्। प्रतिगमन बिरोधि आन्दोलनमा पटक पटक जेल पर्नुका साथै संकटकालमा एक महिना माओवादीको अपहरणमा परेका थिए। जुन समयमा माओवादीले आफूलाई ज्युदै खाल्डो खनेर गाड्न खोजेको उनको भनाई छ।
जीवनमा दुःख संघर्ष र परिश्रम गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय तरुण महासचिव शाही भोलिको दिनमा नेपाली कांग्रेसभित्र उज्ज्वल भविस्य बोकेका नेता हुन्।